ရောဂါမျိုးစုံကို ၀ယ်ယူစားသုံးနေကြသူများ- ကျော်မသွားပဲ ဖတ်ဖြစ်အောင်ဖတ်သွားပါ. - Barnyar Barnyar
ရောဂါမျိုးစုံကို ၀ယ်ယူစားသုံးနေကြသူများ- ကျော်မသွားပဲ ဖတ်ဖြစ်အောင်ဖတ်သွားပါ.
June 2, 2022 thanzin laypyay KNOWLEDGE 0
ဆရာဝန်ညီလေးတစ်ယောက်ရဲ့ ဆေးခန်းကိုလာပြတာ အသက် ၂၀ ကျော်ကောင်ကလေး၊ သူ့စအိုကနေ ( intestinal fluke လို့ခေါ်တဲ့ ) အကောင်အရှင်လေးတွေ ထွက်ထွက်နေတာ ပေါ်လိုက် ပျောက်လိုက်နဲ့ ၃-၄ နှစ်လောက် ရှိပြီတဲ့…
သတိထားမိတာတော့ အဲဒီမတိုင်ခင် ဝက်သားတုတ်ထိုးတွေ အတော်စားဖြစ်တယ်လို့ ပြောတယ်။ အဲဒီအကောင်လေးတွေသာ အသည်းထဲမှာ တွယ်ကပ်မိရင် အတော်ကို ဆိုးဆိုးရွားရွား ဒုက္ခပေးတော့မှာ…
ဒီလပိုင်း/ နှစ်ပိုင်းတွေမှာ ဆေးရုံမှာလည်း မကြာခဏ တွေ့လာရတာတွေက အသက် ၃၀ ဝန်းကျင် လူနာတွေ အစာအိမ်ကင်ဆာ အူမကြီးကင်ဆာတွေနဲ့၊ တစ်ချို့ဆိုရင် ခွဲလို့မရနိုင်တော့တဲ့အခြေအနေမို့ အသက် ၃၀ ကျော်လေးမှာပဲ သေမင်းရက်ချိန်းကို ထိုင်စောင့်နေရတဲ့ ဘဝတွေကိုဖြစ်လို့…
အဲဒီလိုလူနာတွေကို တွေ့ရ မြင်ရ ကြားရတိုင်း လမ်းဘေးမှာ မကျက်တကျက် ပြုတ်တွေ ထိုင်စားနေတဲ့ တုတ်ထိုးဆိုင်တွေ ၊ မကျက်တကျက် ကင်တဲ့အပြင် မီးခိုးငွေ့တွေ ညှော်ငွေ့တွေပါ ရိုက်ထားတဲ့ အကင်ဆိုင်တွေနဲ့ တစ်ခါတလေ ခေါင်းထဲ ဗိုက်ထဲက သွေးတွေတောင် ထွက်လာတတ်သေးတဲ့ ငါးကင်တွေ…
နောက်တစ်ခါ ဆိုင်ကြီးကနားကြီးတွေနဲ့ ရောင်းပြီး ဈေးကြီးပေးစားရတဲ့ ဆိုင်တွေက ပွက်ပွက်ဆူနေတဲ့အိုးထဲ ထည့်ပြီး ကျက်မှန်းမသိ မကျက်မှန်းမသိ ဆယ်စားနေကြတဲ့ အသား ငါး ပုစွန်တွေနဲ့ readymade အသင့်စား အစားအစာလို့ခေါ်တဲ့ ခေါက်ဆွဲခြောက် ကြာဇံခြောက် ကော်ဖီမစ် တီးမစ်တွေကို မျက်စိထဲမှာ ပြေးမြင်မိတယ်…
အသိဉာဏ် ဗဟုသုတမရှိလို့ စားတာလားဆိုတော့လည်း ကိုယ့်ဆရာဝန်တွေတောင် အတော်များများ အားပေးကြတာ တွေ့ရတယ်… တစ်ခါတလေကြုံလို့ အပြောင်းအလဲအဖြစ် စားမိတာမျိုးက မထောင်းသာလှပေမယ့် တစ်ချို့လူတွေကတော့ နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် စွဲစွဲလန်းလန်းကို စားကြတာလည်း တွေ့ရတယ်…
အဲဒီလူတွေထဲမှာ ဒီအစာတွေဟာ ဒီလိုဒုက္ခတွေပေးတတ်တယ်ဆိုတာ သိတဲ့သူတွေ အများကြီးပါတာလည်း တွေ့ရတယ်… အဲဒီတော့ ပြောစရာက တစ်ခုပဲ ရှိတော့တယ်၊ သေရဲရင် စားသာ စားကြပေတော့လို့ပဲ….။credit
ရောဂါမြိုးစုံကို ဝယျယူစားသုံးနကွေသူမြား- ကြျောမသှားပဲ ဖတျဖွဈအောငျဖတျသှားပါ.
ဆရာဝနျညီလေးတဈယောကျရဲ့ ဆေးခနျးကိုလာပွတာ အသကျ ၂၀ ကြျောကောငျကလေး၊ သူ့စအိုကနေ ( intestinal fluke လို့ချေါတဲ့ ) အကောငျအရှငျလေးတှေ ထှကျထှကျနတော ပျေါလိုကျ ပြောကျလိုကျနဲ့ ၃-၄ နှဈလောကျ ရှိပွီတဲ့…
သတိထားမိတာတော့ အဲဒီမတိုငျခငျ ဝကျသားတုတျထိုးတှေ အတျောစားဖွဈတယျလို့ ပွောတယျ။ အဲဒီအကောငျလေးတှသော အသညျးထဲမှာ တှယျကပျမိရငျ အတျောကို ဆိုးဆိုးရှားရှား ဒုက်ခပေးတော့မှာ…
ဒီလပိုငျး/ နှဈပိုငျးတှမှော ဆေးရုံမှာလညျး မကွာခဏ တှလေ့ာရတာတှကေ အသကျ ၃၀ ဝနျးကငျြ လူနာတှေ အစာအိမျကငျဆာ အူမကွီးကငျဆာတှနေဲ့၊ တဈခြို့ဆိုရငျ ခှဲလို့မရနိုငျတော့တဲ့အခွအေနမေို့ အသကျ ၃၀ ကြျောလေးမှာပဲ သမေငျးရကျခြိနျးကို ထိုငျစောငျ့နရေတဲ့ ဘဝတှကေိုဖွဈလို့…
အဲဒီလိုလူနာတှကေို တှရေ့ မွငျရ ကွားရတိုငျး လမျးဘေးမှာ မကကျြတကကျြ ပွုတျတှေ ထိုငျစားနတေဲ့ တုတျထိုးဆိုငျတှေ ၊ မကကျြတကကျြ ကငျတဲ့အပွငျ မီးခိုးငှတှေ့ေ ညှျောငှတှေ့ပေါ ရိုကျထားတဲ့ အကငျဆိုငျတှနေဲ့ တဈခါတလေ ခေါငျးထဲ ဗိုကျထဲက သှေးတှတေောငျ ထှကျလာတတျသေးတဲ့ ငါးကငျတှေ…
နောကျတဈခါ ဆိုငျကွီးကနားကွီးတှနေဲ့ ရောငျးပွီး ဈေးကွီးပေးစားရတဲ့ ဆိုငျတှကေ ပှကျပှကျဆူနတေဲ့အိုးထဲ ထညျ့ပွီး ကကျြမှနျးမသိ မကကျြမှနျးမသိ ဆယျစားနကွေတဲ့ အသား ငါး ပုစှနျတှနေဲ့ readymade အသငျ့စား အစားအစာလို့ချေါတဲ့ ခေါကျဆှဲခွောကျ ကွာဇံခွောကျ ကျောဖီမဈ တီးမဈတှကေို မကျြစိထဲမှာ ပွေးမွငျမိတယျ…
အသိဉာဏျ ဗဟုသုတမရှိလို့ စားတာလားဆိုတော့လညျး ကိုယျ့ဆရာဝနျတှတေောငျ အတျောမြားမြား အားပေးကွတာ တှရေ့တယျ… တဈခါတလကွေုံလို့ အပွောငျးအလဲအဖွဈ စားမိတာမြိုးက မထောငျးသာလှပမေယျ့ တဈခြို့လူတှကေတော့ နှဈနှဈခွိုကျခွိုကျ စှဲစှဲလနျးလနျးကို စားကွတာလညျး တှရေ့တယျ…
အဲဒီလူတှထေဲမှာ ဒီအစာတှဟော ဒီလိုဒုက်ခတှပေေးတတျတယျဆိုတာ သိတဲ့သူတှေ အမြားကွီးပါတာလညျး တှရေ့တယျ… အဲဒီတော့ ပွောစရာက တဈခုပဲ ရှိတော့တယျ၊ သရေဲရငျ စားသာ စားကွပတေော့လို့ပဲ….။credit
ဇက်ကြောတက်, _နောက်ကျောတက်, _လက်ပြင်ငုတ်, _အုံးလွဲနေသူများအတွက်_နာရီပိုင်းအတွင်း ပျောက်တဲ့နည်း
စိတျထားဖွူစငျလို့ ကံကောငျးသှားတဲ့ ညီအကို
Hits Today : 9126
Total Hits : 318834